Yaan La Siyaasadaynin Xuska Shuhadada SNM Ee 17-Ka October” W/Q: Yuusuf Cabdi Gaboobe | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Yaan La Siyaasadaynin Xuska Shuhadada SNM Ee 17-Ka October” W/Q: Yuusuf Cabdi Gaboobe
Haddii Eebe idmo waxaynu barrito xusi doonaa maalinta Shuhadada SNM ee 17-ka October oo sanadkan kusoo hagaagtay xili ay dalka ka socdaan ololayaal ay axsaabta siyaasadu ugu jiraan tartanka doorashadda madaxwaynaha ee la filaayo inay Somaliland ka qabsoonto March 2017-ka.
Munaasibadan oo ah mid qiimo wayn ugu fadhida bulshadda, waxa haboon in sideeda loo xurmeeyo lagana ilaaliyo waxkasta oo wax u dhimi kara milgaha iyo sharafta ay huwan tahay maalintani, sida qof ama koox gaar ahi gooni u sheegato xuskeeda iyadoo dano siyaasadeed ku fushanaysa. 17-ka October waa munaasibad u taagan dhamaan mujaahidiintii SNM ee kasoo qayb gashay dib u xorayntii dalka siiba halyeyadii ku shihiiday halgankii hubaysnaa.
Jimciyada mujaahidka ee SOOYAAL oo iyadu u xilsaaran qabashada xuska munaasibadan 17-ka October, waxa looga fadhiyaa inay muujiso dhexdhexaadnimo oo aanay ku milmin kooxaha ku hirdamaya tartanka siyaasadda. Inkasta oo aan shakhsi uun ka ahaa halgamayaashii SNM, hadana anigoo ah aas-aasihii iyo guddoomiyihii ugu horeeyey ee SOOYAAL ee waliba lahaa hindisihii ay ku timid munaasibadan aynu ka hadlaynaa, waxa aan axsaabta siyaasada iyo xukuumaddaba xasuusinayaa in xuska 17-ka October aanu munaasibad ahaan u qalmin yooyootan siyaasadeed iyo af-madhan oo lala yimaado, balse looga baahan yahay barnaamij wax lagaga qabanayo baahida nololeed iyo darxumada haysa qoysaskii agoomoobay, naafadii halganka iyo mujaahidiinta faraha badan ee shaqo la’aantu silica baday isla markaana niyad-jabka ku riday.
Dagaalkii Burco-duuray ee 17-kii October 1984-kii isku haleeleen dagaalyahanadii SNM iyo ciidamadii Siyaad Barre waxa uu ka mid ahaa dagaaladii badnaa ay SNM soo gadhay. Laakiin waxa uu kaasi kaga duwanaa ciidanka SNM ee goobtaasi ka dagaalgalay oo ka koobnaa mujaahidiin markoodii hore laga soo ururiyey labadii aag ee galbeedka iyo barriga dabadeedna la iskugu keenay magaaladda Awaare, halkaas oo ay ku qaateen tababaro milatari oo kala duwan. Burco-duuray ayaa ugu horaysay ciidan SNM ah oo isagoo isku dhufan goob ka wada dagaal galla. Waxa ku shihiiday sodoneeyo mujaahid oo ay ka mid ahaayeen Lixle iyo Xaamud. Waxa lagu gubay tiro badan oo ka mid ah Bee-beeyadii ay ciidanka faqashtu ku khuukhin jireen mujaahidiinta SNM, taas oo ay dhiirigalin siyaado ah ka qaadeen isla markaana ay kor u kacday kalsoonidii ay ku qabeen qoriga lidka taangiga ee loo yaqaan Baasuukaha ah. Sababahaas dartood ayaan u doortay in xuskan la qabto taariikhda 17-ka October ee sanad walba, taas oo aanay ujeedadeedu ahayn in la xusayo dagaalkii Burco-duuray ama taariikhda shuhadada SNM ay bilaabmayso taariikhda dhacdadaasi.